Email amin'ny horonan-tsary: ​​Fotoana tokony hividianana mpivarotra | Martech Zone
Email amin'ny horonan-tsary: ​​Fotoana tokony hananan'ny mpivarotra manokana
Alatsinainy Martsa 23, 2020 Alakamisy, Desambra 30, 2021 Douglas Karr
Miaraka amin'ny krizy COVID-19, ny fahafahan'ny ekipa mpivarotra ivelany hitazona fifandraisana manokana amin'ny vinan'ny mpanjifany sy ny mpanjifany dia nesorina indray alina. Mpino mafy orina aho fa ny fifanomezan-tànana dia singa iray manakiana ny fizotry ny varotra, indrindra fa ny fandraisana anjara lehibe kokoa. Ny olona dia tokony ho afaka mifampijery maso ary mamaky tenim-batana mba hananana fahatokisana amin'ny fampiasam-bola ataon'izy ireo sy ny mpiara-miasa nofidiny.
Mba hanasarotana ny raharaha dia ny hoavin'ny toekarentsika no resahina. Vokatr'izany, ny ekipa mpivarotra dia sahirana manakatona ny fifampiraharahana… na koa mahazo ny orinasa hamaly. Eo am-panombohana fanombohana amin'izao fotoana izao aho miaraka amin'ny dolara an-jatony izay niorina mafy tamin'ny fantsona… ary ny fifanarahana voalohany dia nampihemotra ny daty. Raha jerena fa manampy ireo orinasa amin'ny alàlan'ny automatisation sy ny fidirana isika, dia fotoana sarotra izao fantatray fa afaka manampy azy ireo isika.
Lahatsary ho an'ny sehatra fivarotana
Izany dia milaza fa manatanteraka izahay vahaolana email mailaka hanampy ireo ekipa fivarotantsika amin'ny fanatsarana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny prospect na ny mpanjifa. Tsy ampitahaina amin'ny olona mivantana ny horonantsary, saingy manome fotoana mahaliana kokoa hiresahana manokana amin'ny prospect na mpanjifa izany.
Ny sehatra video ho an'ny varotra dia manana endrika mahazatra:
Record - firaketana horonan-tsary manokana amin'ny alàlan'ny birao, plugin plugin na rindranasa finday.
Fampidirana CRM - firaketana ny mailaka amin'ny firaka, fifandraisana, kaonty, fotoana mety na tranga.
Enhancement - amboary horonan-tsary ary asio overlay na sivana.
fanairana - Araho maso ireo fandraisana an-tsary amin'ny fotoana tena izy ary mahazoa fanairana.
Pages - fampidirana pejy fidirana hijerena sy hamaly ilay horonan-tsary. Ny sasany aza manana fampidirana calendaring ho an'ny fandaharam-potoana fanendrena.
Report - refesina ny fahombiazan'ny Reports sy Dashboard manokana.
Ireto ny sehatra malaza kokoa:
BombBomb - Mandrakitra, mandefa, ary manara-maso mailaka amin'ny alàlan'ny mailaka haingana sy haingana mba hisongadinan'ny boaty 'prospect', ny mpanjifa ary ny mpiasa.
Covideo - Raketo ary andefaso horonan-tsary manokana hanatsarana ny tahan'ny valiny, hampitombo ny fahafaha-mivarotra ary hifanarahana bebe kokoa
Dubb - Ampitomboy ny orinasanao amin'ny pejy horonantsary azo ampiharina izay azo alefa na aiza na aiza amin'ny topi-maso GIF.
haraka - Ny fandefasana Loom dia mahomby kokoa noho ny fanoratanao mailaka lava na handany ny andronao amin'ny fivoriana misy resaka tsy mila hitranga amin'ny tena izy.
OneMob - Mamorona haingana pejy misy atiny ho anjara fanantenana, mpanjifa, mpiara-miasa ary mpiasa
vidREACH - vidREACH dia mailaka an-tsarimihetsika manokana sy sehatra fifanakalozana varotra izay manampy ny orinasa hirotsaka amin'ny mpihaino azy, hitondra fitarihana bebe kokoa ary hifampiraharaha bebe kokoa.
Lahatsary ho an'ny paikady varotra
Ny boatin-tsarimihetsika rehetra dia avoaka ankehitriny ary sarotra ny olona amin'ny fanivanana ny fitaovana izay afaka manome lanja ny asany. Ity ny toro-hevitra manokana momba ny fampiasana video ho an'ny varotra:
Lohahevitra lohahevitra - Atao Video ao amin'ny laharam-pizahanao miaraka amin'ny sanda entinao.
Ataovy fohy - Aza lany andro amin'ny olona. Ampiharo izay holazainao ary tongava mivantana amin'ilay hevitra.
Omeo lanja - Amin'ireo fotoana tsy azo antoka ireo dia mila manome sanda ianao. Raha manandrana mivarotra fotsiny ianao dia tsy hiraharaha anao.
Fanolorana fanampiana - Omeo ny fotoana mety hanarahan'ny prospect anao na ny mpanjifanao.
fitaovana - Mampiasà fakan-tsary sy mikrô tsara. Raha tsy manana mikrô ianao dia miasa matetika ny headset.
Lahatsary finday - Raha manoratra amin'ny alàlan'ny finday ianao, andramo ny maka sary amin'ny endrika maodely satria hanokatra izany amin'ny mailaka ny olona, ​​mety amin'ny birao raha any amin'ny biraon'izy ireo izy ireo.
Akanjo ho amin'ny fahombiazana - Ny hatsembohana sy ny pataloha yoga no mety ho akanjo ana-biraon'ny trano tsara indrindra, fa mba hampisehoana ny fahatokisan-tena dia tonga ny fotoana handroana sy hanaratra sy hanaovanao akanjo hahombiazana. Hahatonga anao hahatoky tena bebe kokoa izany ary hanana fahatsapana lehibe koa ny mpandray anao.
Background - Aza mijoro eo alohan'ny rindrina fotsy. Ny birao misy loko lalina sy mafana ao aorianao dia ho manasa kokoa.
Fampahafantarana: Mampiasa rohy mifandray aho amin'ny fitaovana sasany ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: BombBombfampidirana crmonemobhoronantsary amidyhoronantsary ho an'ny sehatra fivarotanahoronan-tsary amin'ny mailakaFampidirana YouTube
Tadiavo ny fiantraikany: mamorona resadresaka eran-tany tarihin'ny atiny mitaona aingam-panahy
Doka ara-barotra amin'ny marketing amin'ny atiny: Torohevitra 4 sy tetika XNUMX